डाक्टर बन्ने सपना बुनेकी केकी कसरी बनिन् एक्टर ? – mero sathi tv
On २२ चैत्र २०७४, बिहीबार १४:५२
स्कुलमा नृत्य र नाट्यकलामा सहभागी हुँदा पनि केकीले फिल्म खेल्ने सपना कहिल्यै देखेकी थिइनन् । एसएलसीमा ८६ प्रतिशत अंक ल्याएपछि त झन् उनका बुबाले पनि छोरीको भविष्यको एउटा आकार देखिसकेका थिए । डाक्टर बन्छे भन्ने । र, त्यही अनुसार साइन्स विषय लिएर उनी कलेज भर्ना भइन् । ‘प्लस टु’को परीक्षा दिएपछि उनले एमबिबिएसको तयारी कक्षासमेत लिइन् । यतिवेलासम्म उनी आफ्नो सपनाको सपाट आकार बनाउन दृढ थिइन् । भविष्यमा डाक्टर बन्ने सपना ! ००० भाग्यमा भरोसा गर्नेहरू भन्छन् नि ‘जसको भाग्यमा जे लेखिएको हुन्छ, त्यही हुने हो ।’ केकीको जीवनमा पनि त्यस्तै भयो । त्यसैले त डाक्टर बन्ने सपना बुनेकी उनी ‘रियालिटी सो’मा भाग लिन पुगिन् । तर, उनले नृत्यसम्बन्धी कुनै तालिम भने लिएकी थिइनन् । सम्झिन्, ‘टिभीमा डान्स हेरेकै भरमा मैले सो रियालिटी सोमा भाग लिएकी थिएँ । कुनै उपाधि चुम्नुभन्दा पनि दिउँसोको खाली समय सदुपयोग गर्छु भनेर परिवारको स्वीकृतिमा भाग लिएकी हुँ ।’ केकी प्रतियोगितामा द्वितीय भइन् । त्यही सो उनका लागि ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्यो ।
‘पहिलो फिल्मपछि म यस क्षेत्रमा झन् रमाउन थालेँ, लाग्यो जिन्दगीमा म खुसी हुन सक्ने फिल्ड नै यही हो,’ केकी भन्छिन्, ‘अनि आफूलाई यस क्षेत्रमै डेडिकेटेड बनाउँदै लगेँ ।’ त्यसपछि केकीको पाइला किन रोकिन्थ्यो र ? सुरुवाती दिनमै त्यसवेला चलेका नायक आर्यन सिग्देलसँग ‘आइ एम सरी’मा काम गर्ने अवसर पाइन्, उनले । त्यस दिनदेखि कहिल्यै फर्केर पछाडि हेर्नुपरेन, केकीले । उनका फिल्म हिट नभए पनि फ्लप पनि भएनन् । केकी भने हिट हुँदै गइन् । फिल्मी क्षेत्रमा उनको क्रेज बढ्दै गयो । यहाँसम्म आइपुग्दा स्थापित अभिनेत्रीका रूपमा उनले आफ्नो परिचय बनाइसकेकी छिन् ।
यतिवेला उनी अभिनेत्रीबाट निर्मात्रीसमेत भइसकेकी छिन् । उनको फिल्म ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ नयाँ वर्षमा आउने भएको छ । फिल्मको ‘सिओडब्लू काउ’ बोलको गीतले राम्रै चर्चा बटुलिसकेको छ । गीतको चर्चासँगै फिल्मलाई लिएर उनी निकै सिरियस छिन् । अभिनेत्रीका रूपमा कमाएको लोकप्रियता निर्मात्री बनेर डुब्ला कि भन्ने डर लाग्दैन त उनलाई ? ‘१० वर्षसम्म यस क्षेत्रमा रहेर मैले बुझेको, भोगेको कुराबाट सिकेर नयाँ यात्रा तय गरेकी हुँ । त्यसैले आफ्नो बेस्ट दिने प्रयास गरेकी छु,’ केकी भन्छिन्, ‘इट्स टाइम टु गिभ ब्याक । आशा छ, सधैँझँै दर्शकले मलाई माया दिइरहनुहुनेछ । मैले पनि उहाँहरूलाई निरास बनाउने खालको फिल्म बनाएकी छुजस्तो लाग्दैन ।’ नयाँ पत्रिकाले छापेको छ । ००० निर्मात्रीका रूपमा उभिँदा केकीले अलि भिन्दै खालको अनुभव सँगालेकी छिन् । खेल्न जति सजिलो फिल्म बनाउन छैन भन्ने उनले बुझिसकिन् । तर, उनको सपना यति मात्र होइन । भन्छिन्, ‘कोहलपुर एक्सप्रेस’ सुरुवात मात्र हो, अन्त्य होइन ।’ अन्त्यचाहिँ केबाट गर्न चाहन्छिन् त उनी ? ‘मानिस कहिल्यै कुनै पनि कुराले सन्तुष्ट हुँदैन । म पनि त्यही मान्छे हुँ । यसलाई म पोजेटिभ रूपमा लिन्छु । किनकि असन्तुष्टिले केही गरेकोगर्‍यै गर्ने ऊर्जा थप्छ,’ २८ वर्षकी केकी भन्छिन्, ‘मलाई लाग्छ, म सधैँभरि असन्तुष्ट नै भइरहूँ ।’